‘मेरो सरकार’ प्रति कसैले औंला ठड्याउने ठाउँ छैनः प्रधानमन्त्री - satkar post
‘मेरो सरकार’ प्रति कसैले औंला ठड्याउने ठाउँ छैनः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । संसदीय दललको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीबाट विरोध हुन थालेको भन्दै बचाउ गर्न र समर्थन जनाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिदै भने मेरो सरकारले ल्याएको ‘नीति तथा कार्यक्रममा कसैले पनि औंला ठड्याउने ठाउँ छैन,’ ओलीले भने, ‘यसै अनुसार प्रस्तुत हुनुहोला ।’
संसदीय दलको बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका कारण एक घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो । ओली नआउँदै पार्टी अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपनेता नेम्बाङले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको भन्दै समर्थन जनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारण छलफलका लागि समय नरहेको भन्दै नेम्बाङले २४ गतेपछि दलको बैठक बोलाइने जानकारी दिएका थिए । छलफल गर्न नपाइने भएपछि केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए । राष्ट्रपतिबाट ‘मेरो सरकार’ भनी नीति तथा कार्यक्रममा भएको सम्बोधन र केही तथ्यांकबारे सरकारका तर्फबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने र छलफलका लागि समय दिनुपर्ने माग सांसदहरुको थियो ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ को भाषाशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलको माग गरेकी थिइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमका प्रस्तुत सडक पिचलगायत कतिपय तथ्यांक विवादमा परेको बताइन् । उपनेता नेम्बाङले २४ गतेपछि संसदीय दलको बैठकमा पर्याप्त छलफल गराइने बताए । अर्का सांसद जनार्दन शर्माले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ भनेको के हो ? भन्दै छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘छलफल नगर्ने भए दलको बैठक किन बोलाएको ? ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । अन्य सांसदहरुले पनि छलफलको माग गर्दै गर्दा अध्यक्ष दाहालले सम्बोधन गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष पार्टी एकता र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय एकैसाथ परेका कारण पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको दाहालले बताए । उनले यस वर्षको कार्यक्रमबारे आफूहरुबीच राम्रो छलफल भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ बारे आफू जानकार नरहेको दाहालले बताए । ‘हामीबीच छलफल हुँदा मेरो सरकार भन्ने शब्द थिएन,’ दाहालले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी होला ।’
नेकपाका सांसदलाई छलफलमा रोक
यस्तै नेकपाले संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा सहभागी हुन सांसदहरूलाई रोक लगाएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले समय नभएको भन्दै सांसदहरूलाई छलफलमा रोक लगाएका हुन् ।
संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएका भाषा र तथ्यांकबारे छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उठेका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट जबाफ दिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तीनै नेताले नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने मतदानमा समर्थन जनाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २४ गते मतदान हुनेछ ।